Mayelana NATHI - Dongguan Pretty Shiny Gifts Co., Ltd.
Izipho ze-Dongguan Pretty Shiny Co., Ltd.
Usizo lwabenza imisenenzi Isipho & Umhlinzeki wePrimiyamu
Singumhlinzeki oholayo wezinto eziyisikhumbuzo zensimbi, i-lapel pin namabheji, izindondo, izinselelo zemali, okhiye bezikhiye, amabheji wamaphoyisa, imifekethiso nezimagqabhagqabha ezilukiwe, imisila yenkomo, izesekeli zocingo, amakepisi, izinto zokubhala nezinye izinto zokuphromotha.
Izisekelo zethu zokuzibophezela emphakathini - Ukuhola okuphansi, i-Phthalate Free ne-eco-friendly ngokuphelele ukuhlangabezana nezinga lokuhlola lezinhlangano zomhlaba wonke, kanye nokuphepha kwabasebenzi kanye namandla ayo aqinile, ukulethwa ngokushesha, ikhwalithi yakudala nentengo yokuncintisana, imboni yaseDongguan inayo uphase ukuhlolwa kwamabhuku futhi uthola ukugunyazwa okuvela kumikhiqizo nezinkampani ezidumile emhlabeni, njenge-SEDEX, Disney, NBCUniversal, McDonald, Starbucks, Coca Cola kanye ne-Bureau VERITAS.
Asinawo umkhawulo we-MOQ kuma-oda, ungabeka i-oda lakho nganoma yisiphi isayizi yobungani esifanelana nezidingo zakho ezithile.
Precision isikhunta, ubuchwepheshe lobuchwepheshe, bewumsebenzi ngokucophelela ukuqinisekisa izimpahla zethu isicelo njalo ukuhlangabezana izicelo zakho.
Ngaphandle komkhawulo wabangenisi noma izinkampani zokuhweba, uzothola intengo yokuthenga eqonde ngqo yasefekthri evela kithi.
Ngeminyaka yesipiliyoni sebhizinisi, ukuxhumana okuhle nokuqonda ngezidingo zamakhasimende, sihlela isinyathelo sakho esilandelayo kusenesikhathi futhi sinikeze insizakalo ephelele yobuchwepheshe.
Abasebenzi abangama-2500 kanye nenqubo yokuphrinta / ukupholisha okuzenzakalelayo okuthuthukile kanye nenqubo yokubala, ungathembela kithi ngokuphelele ngaphandle kokukhathazeka kokulethwa.
I-One Stop Service
Kusuka ekwakhiweni, ekukhiqizeni, ku-QC, ekupakisheni ukulethwa, ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho kanye.
● Sebenza kahle
● Isenzo Esinolaka
● Inkazimulo Yabelana